SomaliTalk.com » 2010 » August » 04
Home » Archive Maalinta August 4th, 2010
Qaybtan waxa ay ku saabsan tahay Taariikhda Soomaaliya xilligii bilowgii Islaamku soo gaarey Soomaaliya iyo safaradii ay Soomaaaliya ku yimaadeen bad-mareenadii Carbeed iyo bad-mareenadii Muslimiinta ahaa. Waxa kale oo Sheikh Saadiq Eenow kaga warbixinayaa jidkii ganacsiga ee loo aqoonjirey Wadadii Xariirta ahayd taas oo isku xiriirin jirey ganacsiga Yurubta Koonfureed ilaa Shiinaha, wadadaas oo mari...
Halkan ka dhegeyso gabayga oo maqal ah. Aniga oo ah Maxamuud Axmed Cabdalle (shiine) waxan idiin soo gudbinayaa gabay aan u dirayo Madaxweynaha Puntland, Cabdiraxmaan Faroole. Gabaygan waxan tiriyey ka dib dagaallada ka aloosmay Puntland, kuwaasoo la qaboojiyey oo odayaasha degaanku u guntadeen, laga soo yaabo inay dib u qarxaan. Waxa xusid mudan in Dawladda Kumeelgaarka ah ee Soomaaliya hub iyo saanad...
Cabsi weyn oo laga qabo in Dagaalada Muqdisho ay sii xoogeystaan Bisha Ramadaan
iyo Sheekh Shariif oo dadaal ugu jira sidii ay Xukuumadda Cumar C/rashiid u heli lahayd codka Kalsoonida …. Muqdisho iyo cabsida dagaaladda bisha Ramadaan Dadweynaha ku dhaqan Magaalada Muqdisho ayaa welwel iyo walbahaar ka qaba in uu sii xoogeysto dagaalada ka jira magaalada Muqdisho inta lagu guda jiro Bisha Ramadaan oo iyagu galaaftey dad fara badan oo soomaaliyeed qaarkood waxay ku...
Madaxii hore ee Ciidanka Ammaanka Koonfur-Africa oo lagu xukumey 15 sano…
Madaxii hore ee haystey ciidamada amaanka k/africa oo xilkii laga eryey sanadkii hore kadib markii lagusoo eedeyey musuqmaasuq iyo gacan-siinta nin ay saaxiibo ahaayeen oo u xiran dil iyo ka ganacsiga daroogada ayaa saakey (3 august 2010) waxay maxkamada darajada sare ku xukuntay 15 sano oo xarig ah. Mr Jakie Selebi oo aad looga yaqaan dunida waxa uu kamid ahaa siyaasiyiinta ugu caansan xisbiga talada...